Windows 10: အရင်းအမြစ်များကို GNU / Linux | Linux မှ
Windows 10: Samba ကို GNU / Linux ပေါ်ရှိအရင်းအမြစ်များကိုချိတ်ဆက်ရန်
အများပြည်သူနှင့်ကြီးမားသောဗဟုသုတနှင့်မည်သို့ရှိသနည်း။ Samba သည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်စီမံကိန်းဖြစ်သည် ကြောင်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုခွင့်ပြုပါတယ် Windows ဖိုင်မျှဝေခြင်း protocol အမျိုးအစား Operating စနစ်များအတွက် UNIXအထူးသဖြင့်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းတူသော GNU / Linux များ.
Samba တက်လာ Windows ကို7ပုံမှန်အားဖြင့် enabled ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်ကစပြီးအရင် version မှာပါ Windows 8.Xနှင့်လက်ရှိတစ်ခုမှာ, Windows ကို 10၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားရမည် မျှဝေအရင်းအမြစ် ဤအတူကွန်ပျူတာတစ်ခုကွန်ယက်၌ ပုဂ္ဂလိက operating system များနှင့်အတူကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည် GNU / Linux များ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသိရှိရန်နှင့်၎င်းရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည်။
protocol ကို Samba အဖြစ်လူသိများ SMB (ဆာဗာမက်ဆေ့ခ်ျပိတ်ဆို့ခြင်း)နှင့်ကဲ့သို့အချို့သောစာပေ၌တည်၏ CIFS (ပုံမှန်အင်တာနက်ဖိုင်စနစ်)ကွန်ပျူတာများကိုခွင့်ပြုရုံသာမက GNU / Linux၊ Mac OS X (သို့) Unix ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည် Windows အခြေပြုကွန်ယက်များတွင်အရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ရယူနိုင်သည်။ Unix application များ၏အစုံ သောအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော SMB protocol, အဘို့အသုံးပြုသည် client-server ကိုစစ်ဆင်ရေး ကွန်ယက်တစ်ခုထဲတွင်။
ဤနည်းအားဖြင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံး Unix က ဒါမှမဟုတ်အလားတူ Samba သင်ရိုက်ထည့်နိုင်သည် မိုက်ကရိုဆော့ဖကွန်ရက်အဖြစ်သူ့ဟာသူဖေါ်ပြခြင်း ဆာဗာနှင့် / သို့မဟုတ်လိုင်းနှင့်ဤသို့ဖြစ်နိုင်မည် -
Client ကွန်ပျူတာများကိုကွန်ယက်ပေါ်တွင်ကြည့်။ စူးစမ်းလေ့လာရန်၊ သူတို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်လွယ်ကူစေရန်
ဖိုလ်ဒါများ၊ ဖိုင်များသို့မဟုတ်ဒစ်ခ်များ၊ ပရင်တာများ၊ စကင်နာများနှင့် MFPs များကဲ့သို့သောကွန်ယက်ရင်းမြစ်များကိုမျှဝေသုံးစွဲပါ။
၀ င်းဒိုးကွန်ယက်ပေါ်ရှိ Name Resolution Server (WINS) နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြုခြင်း။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်အကြောင်းအရာမလေ့လာမီ၎င်းကိုသတိရပါ Windows ကို 10, ခေတ်မီဆုံးနှင့်အဆင့်မြင့်သည် Microsoft operating systemမှ 29 က de Julio က de 2015စဉ် Windows ကို7မှ ဇန်နဝါရီလ 14 2020မရှိတော့ပါ တရားဝင်တိုးချဲ့ထောက်ခံမှု။ စဉ်တွင်, Windows ကို 8.1 ကနေတူညီတဲ့အကျိုးဆက်ခံရလိမ့်မယ် ဇန်နဝါရီလ 10 2023.
ထို့ကြောင့်၊ သို့မဟုတ်၎င်းတို့အားအခမဲ့အစားထိုးသည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များကဲ့သို့ GNU / Linux များသို့မဟုတ်သင်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးနှုန်းကိုသင်ပေးရမည် Windows ကို 10 ထို့ကြောင့်တရားဝင်ထောက်ခံမှုရှိသည်။
1 GNU / Linux ရှိအရင်းအမြစ်များကိုချိတ်ဆက်ရန် Windows 10 ရှိ Samba Service ကိုဘယ်လိုအသက်သွင်းရမလဲ။
1.2 ခြေလှမ်း 1
1.3 ခြေလှမ်း 2
1.4 ခြေလှမ်း 3
1.5 ခြေလှမ်း 4
1.6 ခြေလှမ်း 5
GNU / Linux ရှိအရင်းအမြစ်များကိုချိတ်ဆက်ရန် Windows 10 ရှိ Samba Service ကိုဘယ်လိုအသက်သွင်းရမလဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုအတွက်, ငါတို့သုံးပါလိမ့်မယ်2ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ပျူတာများနှင့်အတူတ Windows ကို 10 နှင့်အခြား MX Linux 19.1 (DEBIAN ၁၀.၃) အိမ်ကွန်ယက်တစ်ခုတွင်ကွန်ယက်ဆာဗာများမပါ ၀ င်ပါ။ ရုံ လမ်းကြောင်း ကသတ်မှတ်ပေးထားတယ် အိုင်ပီလိပ်စာများ ခေတ်မှီ
ဒါဟာကွန်ပျူတာနှင့်အတူစံပြဖြစ်ပါတယ် Windows ကို 10 တစ်ခုရှိသည် အသင်းနာမည် y Workgroup / ဒိုမိန်းအမည် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဆိုလိုသည်မှာတိုတို၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမှတ်မိလွယ်ပြီးလိုအပ်လျှင်ဖြစ်နိုင်လျှင်။ ထိုအဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှသော Workgroup / ဒိုမိန်းအမည် ထဲမှာ configured ကဲ့သို့တူညီသည် GNU / Linux ကိုအတူကွန်ပျူတာ။
ကွန်ပျူတာအမည်နှင့် Workgroup / Domain အမည်ကိုပြုပြင်ပါ
ကြောင်းယူဆ ကွန်ယက်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အမည် ကွန်ပျူတာကနေ GNU / Linux များ ပင်လယ် "အိမ်", သင်နှင့်အတူကွန်ပျူတာကိုသွားရပေမည် Windows ကို 10, ခေါ် tab ကိုအတွက်ရပ်တန့် "အသင်းနာမည်" ပြတင်းပေါက်ကနေ "စနစ်ဂုဏ်သတ္တိများ", ၏ထို option အားဖြင့်ဝင်ရောက် Control panel ကို ခေါ်ဆိုခ «အဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာပြင်ဆင်မှု»အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအပြောင်းအလဲလုပ်ပါ။
တစ်ခေါက်တည်းသောနှစ်ဆပြောင်းလဲမှုကိုသင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ "အသင်းနာမည်" ပထမ ဦး စွာ restart, ထို့နောက်ထို့နောက်«၏နာမအလုပ်အဖွဲ့ " ကွန်ယက်နှင့် reboot ။
Windows 1.0 ရှိ SMB10 / CIFS အင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်ပါ
ဤအဆင့်တွင်သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမည် "Windows လုပ်ဆောင်ချက်များ" လမ်းကြောင်းကတဆင့် "Control Panel", "Programs" နှင့် "Programs and Features"။ အဲဒီမှာပြီးတာနဲ့သင်နှင့်သက်ဆိုင်သော box ကို (activate) ကိုနှိပ်ပါ "SMB 1.0 / CIFS ဖိုင်ဝေမျှခြင်း protocol ကိုထောက်ပံ့ခြင်း".
ပြီးရင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "Activate"၊ ချက်ချင်းအောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း။ အပြောင်းအလဲများကိုအပြည့်အ ၀ လက်ခံရန်အတွက် reboot ဖြစ်သင့်သည်။
ဆန္ဒရှိလျှင်, ၏ checkbox ကို "SMB direct" protocol ကိုပိုမိုအဆင့်မြင့်ထောက်ခံမှု (အသုံးပြုမှု) အတွက်။
Windows Power Shell မှ SMB 1.X / 2.X / 3.X အတွက်အထောက်အပံ့ကိုအတည်ပြုပြီး enable
ကနေတဆင့် detect နှင့် activate / ပိတ်ထားရန် Windows Power Shell ပါအဆိုပါ Samba ကွန်ယက် protocol ကို မှ Windows ကို 10အမှုတစ်ခုစီအတွက်အောက်ပါ command များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုအတွက် protocol နှစ်ခုလုံးကို activate လုပ်တယ်။ SMB 1.0 နှင့် SMB 2.X / 3.X လျှောက်လွှာသုံးပြီး "Windows PowerShell ISE" como "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး", ထိုချက်ချင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ၌ပြထားတဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုအတွက်ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုခေါ်မယ် "ဥပမာ" ၏အမြစ်မှာ 10 Windows operating system အမည်ရှိအသုံးပြုသူဖန်တီးသည်အဘယ်မှာရှိအသုံးပြုခဲ့သည် "Sysadmin" ("အက်မင်", လမ်းကြောင်းထဲမှာဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူအရသိရသည် "C: \_ အသုံးပြုသူများ \_ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး"။ ဖော်ပြပြီးသောအရင်းအမြစ်ကိုအသုံးပြုသူ၏ဖြည့်စွက်မှုနှင့်အတူဖန်တီးရမည် "လူတိုင်း" လိုအပ်သောလုံခြုံရေးခွင့်ပြုချက်အားလုံးနှင့်အတူ၊ ဒီကိစ္စမှာကွန်ယက်ပေါ်တွင်အမည်တူစွာအတူတူမျှသည်၊ "ဥပမာ".
Sysadmin အသုံးပြုသူ၏အမည်အမှန် - admin
အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ချက်နှင့်လုံခြုံရေးခွင့်ပြုချက်အားလုံး - «ဥပမာ»ဖိုင်တွဲသို့
"ဥပမာ" ကွန်ယက်အမည်သတ်မှတ်ခြင်း: ရှယ်ယာများအတွက်။
ကွန်ရက်အရင်းအမြစ်ပြသမှု - Windows 10 မှ
ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ share ကို GNU / Linux နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
ဒီအဆင့်အတွက်ကွန်ပျူတာကိုခေါ် "VITP2413" ငါတို့ဖွင့်မယ် ဖိုင် Explorer ကို ငါတို့အတွက် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်, Samba မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ရန် "နမူနာ" ကိုမျှဝေပါ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တည်ရှိသည် "VIT" ဘာရှိလဲ Windows ကို 10အောက်ပါပုံများမှာပြထားတဲ့အတိုင်း -
ဖိုင် Explorer ကို run နေ: ကွန်ယက်လမ်းကြောင်းကို run ရန် "Smb: // vit / ဥပမာ" နှင့်အတူကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မျှဝေအရင်းအမြစ်ဆီသို့ ဦး တည် Windows ကို 10.
၀ င်းဒိုး ၁၀ အသုံးပြုသူအညွှန်းကိန်းများ - အဆိုပါ Samba ဆက်သွယ်မှုသည်။
ပြသမှုကိုဝေမျှပါ Windows 10 တွင် "Example" ဟုခေါ်သည် GNU / Linux ပေါ်တွင်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဒီအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်တရားဝင် link ကို အဲ့ဒီအကြောင်း။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «¿Cómo activar el Servicio de Samba en Windows 10 para conectar recursos compartidos en GNU/Linux?»၎င်းသည်ယခုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အရေးကြီးသောနည်းပညာလည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် «Windows 7»၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းမဟုတ်တော့ဘဲတရားဝင်အထောက်အပံ့ဖြင့်လည်းဖြစ်သည် «Microsoft»အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Windows 10: Samba ကို GNU / Linux ပေါ်ရှိအရင်းအမြစ်များကိုချိတ်ဆက်ရန်
Camilo Gómezအေ ဟုသူကပြောသည်
တကယ်တော့၊ Windows 10 ကိုပုံမှန်အားဖြင့်မဖွင့်ထားဘူးဆိုရင် smb1 ဖြစ်တယ်။ သို့သော် smb (cifs) protocol သည်ပုံမှန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သောအချက်မှာငါ smold များနှင့် smb2 ကို အသုံးပြု၍ ဖိုလ်ဒါများကိုမျှဝေချင်သော Linux စက်ပေါ်ရှိ Samba ပြင်ဆင်မှုတွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
Camilo Gómez A. ထံပြန်ပို့ပါ။
Camilo ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်နှင့်ဆွေးနွေးချက်အပေါ်ရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Gonzalo Montes က de Oca ဟုသူကပြောသည်
Windows မျှဝေထားသောဖိုင်တွဲများကို Linux တွင်ပင်အောက်ပါ command ဖြင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ mount -t cifs // ip / resource / mount_point -o domain = domain, username = user
၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာသည် Active Directory ဒိုမိန်းတွင်ရှိပါက "domain" သတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
Gonzalo Montes de Oca သို့စာပြန်ပါ
Gonzalo! ဆွေးနွေးထားသည့်အကြောင်းအရာအပေါ်သင်၏ထင်မြင်ချက်နှင့်ထည့် ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၊ graph မှတဆင့်ထက် terminal မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုပိုကောင်းသည်။
Cloudflare Developer များသည် Linux တွင် Disk Encryption အရှိန်မြှင့်ရန် Patch များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်
Chrome 82 ဘယ်တော့မှရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, Chrome 83 ကိုဖြန့်ချိမည့်နောက် version ဖြစ်သည်